Wasiirka Dalxiiska Seychelles oo booqday xarumo yar yar oo La Digue ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wasiirka Dalxiiska Seychelles oo booqday xarumo yar yar oo La Digue ah
Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Ku soo noqoshada xididkiisa, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Mr. Sylvestre Radegonde, oo qudhiisu ah Diguois, ayaa u dhoofay jasiiradda La Digue, isaga oo ugu baaqay xarumaha yar yar dadaalladiisa joogtada ah ee uu ku baranayo la -hawlgalayaasha dalxiiska ee maxalliga ah iyo alaabadooda.
Mulkiilayaasha La Digue waxay si wada jir ah isugu raaceen in jasiiraddu ay dib ugu soo noqonayso nolosha iyadoo booqdayaashu si tartiib ah u soo noqonayaan.
Wasiir Radegonde ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay ilaalinta La Digue iyo hab -nololeedkeeda.
Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska Marwo Sherin Francis ayaa muujisay in qaar ka mid ah xarumahan yaryar ay leeyihiin heerar la mid ah kuwa waaweyn, hudheelada raaxada.
Wasiir Radegonde oo uu weheliyo Xoghayaha Guud ee Dalxiiska Marwo Sherin Francis, ayaa socdaalkiisa La Digue ka bilaabay Khamiista, Ogosto 19, 2021, Lakaz Safran. Waxaa ku xigay La Digue Self Catering Apartments, Chez Marston, Domaine Les Rochers, Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, Tanette's Villa, Fleur de Lys, Auberge De Nadege, Ylang Ylang, Hyde-Tide Apartments oo ku dhammaatay La Digue Holiday Villas.
The Booqashooyinka wasiirada wuxuu sii socday maalintii ku xigay isagoo ka bilaabanaya Kaz Digwa Self Catering oo ay ku xigto Pension Fidele, Gregoire Apartments, Pension Hibiscus, Lucy's Guesthouse, Cabane Des Anges, Pension Michel, Le Repaire Boutique Hotel & Restaurant, Chez Marva, La Belle Digue Don oo ku dhammeystay Belle Amie.
Milkiilayaasha La Digue waxay si wada jir ah isugu raaceen in jasiiraddu ay dib ugu soo laabanayso nolosha iyadoo booqdayaashu si tartiib ah u soo noqonayaan. Socotooyin badan ayaa wali isku arka inay soo jiidanayaan soo jiidashada jasiiradda, gaar ahaan xasilloonida jasiiradda iyo soo dhaweynta dadka, iyagoo is -arka inay dareemaan inay guriga ku sugan yihiin.
Dhowr ka mid ah milkiilayaasha xarumahan ayaa walaacyo badan ka qabay la'aanta shaqaale la isku halleyn karo iyo halis ku ah hab nololeedka La Digue. Waxa kale oo ay ka dhawaajiyeen walaacooda ku saabsan tirada sii kordhaysa ee dadka maalin walba socdaalka ah. Sababo dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin hoos u dhaca soo noqnoqoshada doonyaha imaan jiray jasiiradda oo si weyn u saameeyay heerarkooda deggenaansho, ayaa booqdayaal aad u yar ay habeen u hoydaan, taasoo hoos u dhigtay dakhligii jasiiradda.
Iyada oo leh soojiidasho dhab ah, La Digue waxay magac u sameysay inay siiso dadka safarka ah waayo -aragnimada dhaqanka ugu dambeysa, hase yeeshe, casriyeynta ayaa ku hanjabtay inay burburin doonto qaar ka mid ah astaamaha gaarka ah ee jasiiradda.
Wasiir Radegonde wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la dhawro La Digue iyo hab-nololeedkeeda: “Diguois kuma noolaan karto safar-maalmeedyada, waxaan u baahannahay inaan fahanno sababta booqdayaashan aysan u hoyan. Waxaan u baahannahay inaan siinno booqdayaashayada wax ay ku sii nagaadaan, taas oo ah sababta ay tahay inaan u kala duwanaano badeecadaheena oo aan soo nooleyno dhaqdhaqaaqyadeena dhaqanka. In kasta oo La Digue ay tahay mid ka mid ah meelaha tirada yar ee ku haray Seychelles oo u suurtagashay in ay sii haystaan ​​hab -nololeedka qowmiyadda, waxaan u baahannahay inaan xaqiijinno jiritaankeeda. ”
Wuxuu sii raaciyay: “Xarumahan yar yar waxay fiiro gaar ah siiyaan faahfaahinta, iyagoo siinaya booqdayaashayada kuwa runta ah Khibrada Seychelles, taas oo ah sababta ay ugu baahan yihiin taageeradayada ugu badan. Waa inaan sahaminaa fikradaha hal -abuurka leh ee ku dhiirri -gelinaya booqdayaasha inay qarashgareeyaan oo ka caawiyaan xarumahan inay hagaajiyaan hababka suuqgeynta. ”
PS Francis waxay muujisay sida ay ugu qanacsan tahay tayada badeecadaha La Digue, “Qaar ka mid ah xarumahan yaryar waxay leeyihiin heerar la mid ah kuwa waaweyn, hudheelada raaxada; aad u waasac ah oo aad loo qurxiyay siinaya booqdayaashayaga dareen aad u wanaagsan iyada oo la ilaalinayo soo jiidashada jilicsanaanta. ”
Wasiir Radegonde ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyay Diguois hagaajinta nadaafadda jasiiradda. Waxa kale oo uu xusay in ay jiraan dheelitirnaan wanaagsan oo badeecadaha marka la eego hoyga iyada oo daryeel iyo dedaal xooggan la geliyay alaabtaas. Si kastaba ha noqotee, wuxuu garwaaqsaday caqabadaha iyo sida ay tahay inay uga weeciyaan diiradooda suuqyada dhaqameed ee Galbeedka Yurub oo ay u galaan suuqyada, sida Bariga Yurub iyo UAE, kuwaas oo muujiyey karti weyn intii lagu jiray aafadan.
Booqashooyinkan ayaa qayb ka ah hawsha socota ee Wasiir Radegonde ee ah in la dhiso xidhiidh adag oo lala yeesho warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah iyo wax ka qabashada arrimaha muuqda.